माओवादीलाई गाली गरेको भन्दै राजपा दुई भागमा विभाजन ! – Etajakhabar
माओवादीलाई गाली गरेको भन्दै राजपा दुई भागमा विभाजन !
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा समेटिएका विषय वस्तुबारे शीर्ष नेताले अनविज्ञता प्रकट गरेपछि पार्टीभित्रको भाँडभैलो सतहमा आएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजपाले बिहीबार घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। घोषणापत्रमा ‘अन्य पार्टीबारे राजपाको दृष्टिकोण- शीर्षकमा समेटिएका केही वाक्यांशप्रति घोषणापत्र सार्वजनिककर्ता नै जानकार नहेको खुलेको छ। घोषणापत्रमा समेटिको विषयप्रति सञ्चारकर्मीले जिज्ञासा राखेपछि ‘गल्ती- भएको शीर्ष नेताले स्विकारेका छन्। यो खबर चिरञ्जीबी ढुंगानाले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भाद्र २३, २०७४ समय: ७:४८:०९